Apple Bhadhara Cash ichada ID yako kana rezinesi rekutyaira | IPhone nhau
Ichi chichava chimwe chezvinhu zvitsva zveIOS 11 izvo zvataigona kuona mumharidzo yapera June asi yatisina kumbonzwa chimwe chinhu kubvira ipapo, sezvo ichigere kuwanikwa mune chero betas iyo Apple yakatangisa kusvika parizvino. Iyi itsva Apple Kubhadhara sevhisi iyo inobvumidza kubhadhara pakati pevanhu chinhu chakavanzika mune zvakawanda zvinhu, uye ikozvino nekuda kwekupedzisira beta yakatangwa tinoziva chimwe chinhu.
Apple Bhadhara Cash inoshandisa chaiyo kadhi iyo iwe yaunogona chete kushandisa kubva kuApple kifaa, isina yepanyama vhezheni, uye izvo zvinoshanda kwete chete kubhadhara pakati pevanhu asiwo ku unobhadhara muzvitoro zvepanyama uye zvepamhepo zvinoenderana neApple Pay. Uye kuti utore kadhi iri unofanirwa kusimbisa chitupa chako nemufananidzo wekubvumidza kana nemufananidzo wako, sezvavakawana muiyo kodhi yeIOS 11.
Ichabatanidzwa muMessage, uye iwe unozokwanisa kubhadhara chero mushandisi anoshandisa iyi mameseji system uye zvakare ane iyi sarudzo yakagadzirirwa. Mari iyoyo inounganidzwa mune chaiyo kadhi, senge iyo inoonekwa mumusoro wemufananidzo, uye Richava kadhi richachengetwa muchikwama nemamwe makadhi echikwereti anoenderana neApple Pay yekushandisa munzvimbo dzinoenderana. Iwe unogona zvakare kushandisa iyo mari pese paunoda iwe kutarisa yako account, haifanire kunge iri kuchengetwa mune ino chaiyo kadhi.
Kuve nzira nyowani yekubhadhara, zvinotarisirwa zvachose kuti Apple inoda kuzivikanwa kwemushandisi kupa kadhi. Zvinoenderana nekodhi yeIOS 11, Apple inokumbira "rezinesi rekutyaira kana rimwe kadhi rekuzivisa rine mufananidzo". Imwezve diki diki yeiri sevhisi yatisingazive zvimwe zvakakosha, sekunge kuchave nekomisheni yekuishandisa kana kuti bharanzi reiyo chaiyo kadhi ichadzoreredzwa sei. Iko kune kushoma kuziva ruzivo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple Bhadhara Cash ichada chitupa chako kana rezinesi rekutyaira
Apple inowedzera iyo color gamut yeBeats Solo3 Wireless